Lapel Pins & Pin Badges Factory - Shiinaha Lapel Pins & Pin Badges -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha
Ku hel biinanka caadada ah qiimo jaban oo leh qiime aad u sarreeya Markaad rabto tayada sare iyo qiimayaasha hooseeya ee biinanka lapel, ha ka sii dheerayn Pretty Shiny. Laga soo bilaabo 1984, waxaan ka caawinnay kumanaan macaamiisha adduunka ah inay abuuraan biinanka tayada leh munaasabad kasta. Si kasta oo aad u baahan tahay biinanka milatariga, biinanka tacliinta, biinanka wacyi -gelinta, summada booliiska, biinanka ganacsiga, biinanka adeegga, biinanka diinta, biinanka fasaxa, biinanka abaal -marinta iyo wax ka badan, kaliya noo soo dir naqshaddaada, waxaan soo jeedin doonnaa inaan buuxino codsigaaga & miisaaniyaddaada . Hababka la heli karo: Pin pin dhaldhalaalka dhaldhalaalka adag (cloisonné pin) - Dahabka oo kale iyo dhammaystirka waara, midabada waa la ilaalin karaa 100 sano iyadoon la beddelin ● Ku dayashada dhalada dhaldhalaalka adag (ku -dayashada cloisonné) - Caadiga ah oo ugu dhalaalka badan, habka wax -soo -saarka loogu jecel yahay musmaarrada Olombikada P Musmaarrada dhaldhalaalka jilicsan ee dhaldhalaalka ah - Tayo sare iyo kharash jaban P biinanka dhaldhalaalka jilicsan ee dhaldhalaalka ah - Tayo sare leh oo eegaya qiimaha ugu jaban habka midabaynta ● Dhimasho aan lahayn biinanka jilbaha midabka leh - Waxaa loo heli karaa dhammaystirro kala duwan Ins Musmaarrada jilbaha dhaldhalaalka ah ee sawir-qaade ah-Ka khafiifsan oo ka fudud culeyska halbeegga, doorashada ugu fiican ee naqshadaha waaweyn Ins Silkscreen daabacaadda musmaarrada lapel - Soo bandhigidda midabka ugu saxsan P Musmaarrada laabel ee daabacaadda dib -u -dhigga - Ugu badnaan hayso faahfaahinta astaanta asalka ah iyo sidoo kale soo bandhigidda midabka cufnaanta leh ● Dhimashada biinanka sinjiga/biinanka jilbaha - saamayn 3D aad u fiican Waxyaabaha: naxaas, naxaas, bir, birta zinc, pewter, aluminium, birta birta ah Qalabyada biinanka lapel ee Ikhtiyaarka ah: ku dheji xajmiga balastarka, fur & lowska, birlabka, biinka badbaadada, xir-xiridda, iwm. Biinanka gaarka ah ayaa la heli karaa: biinanka dhaldhalaalaya, musmaarrada leh dhaldhalaalaan, biinanka dhaadhaca, musmaarrada xujooyinka, biinanka daloola, biinanka iftiimaya, biinanka dhaqaaqaya, musmaarrada dhalaalaya, biinanka madaxa bobbing Tixraaca Xirxirida: kaarka warqadda oo leh bac, sanduuq caag ah, kiish jilicsan, sanduuq warqad ah, sanduuq cawl
Musmaarrada Lapel ee qumman
Tie Tack / Tie Pin / Tie Tack Tack
Farsamo Cusub - Naqshadeynta 3D oo leh Dhameynta Daabacaadda UV